Xulka gobolka Mudug oo u gudbay is-reebreebka 2-aad & kan gobolka Karkaar oo guul daro la hoyday. – Radio Daljir
Diseembar 14, 2009 12:00 b 0
Garoowe Dec 14 – Ciyaar aad u xiiso badan ayaa galabta garoonka kubadda cagata ee ee Mire Awaare ku dhax maray kooxaha kubadaa cagta ee gobollada Mudug iyo Karkaar.
Ciyaartaan oo ahayd mid labada kooxoodba ay soo bandhigeen ciyaar wanaaagsan oo heer sare ah ayaa guushu ku raacday xulka kubadda cagta ee gobolka Mudug, halka xulka kubadda cagta ee gobolka Karkaar-na ay sidaa ku hareen.
Xulka gobolka Mudug ayaa dhaliyey 4 gool, halka kan gobolka Karkaar-na ay la yimaadeen 2 gool oo keliya.
Tani waxaa ay ka mid ahayd ciyaarihii ugu weerarka iyo difaaca badnaa ee wareega 1-aad ee is-reebreebka gobollada.
Ciyaartaan oo lagu tilmaamay in ay ka mid ahayd kuwii ugu xamaasadda badnaa ciyaaraha gobollada ee dhawaan bilawday, ayaa qaybtii hore ee ciyaarta lagu kala nastay hal gool oo kaliya oo ay lahaayeen xulka kubadda cagta ee gobolka Karkaar, halka ciyaarhayannada gobolka Mudug-na aysan waxba dhashan qaybtii hore ee ciyaarta.
Markii la iskugu soo laabtay wareeggii danbe ee ciyaaraha ayey labada kooxoodba la yimaadeen dar-dar cusub oo ay ku baadi goobayeen hanashada guusha ciyaarta, waxaana xulka gobolka Mudug u suurto gashay in ay la yimaadeen 4 gool, halka xulka Karkaar-na ay gool kale dhashadeen, waxaana ciyaartu ku dhammaaday 2 iyo 4 xulka gobolka Mugug ay ku badiyeen.
Gobolka Mudug oo galabta ka badiyey gobolka Karkaar, waxaa shaki badan laga muujinayey soo bixitaankiisa maadama labo ciyaarood oo hore midna laga badiyey midna ay bareejo soo galeen, hase ahaatee haatan waxay ku soo baxeen golal badni kadib markii ciyaartii galabta ay afar gool la yimadeen.
Gobolka Karkaar ee galabta laga badiyey horay waxay u soo ciyaareen labo ciyaarood oo ay mid badiyeen halka midda kalana laga soo badiyey.
Qarax lala beegsaday ciidanka amniga Boosaaso oo khasaaro gaystay & ciidanka oo hadda ku raadjooga ciddii ka danbaysay.
?Boqorre oo aan ka waraysanay baaqashada fadhiga baarlamaanka.